ဘာသာပြန်ကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 5
မူရင်းကဗျာ In the Trap / Najwan Darwish (1978 – –) မြန်မာပြန် TS
မူရင်းကဗျာ In the Trap / Najwan Darwish (1978 – –) မြန်မာပြန် TS – ထောင်ချောက်ထဲက (မိုးမခ) သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၁၆ ထောင်ချောက်ထဲက ကြွက်က ပြောပြ၊ သမိုင်းဟာ ငါတို့ဘက်သားမဟုတ် တွားသွားကောင်တွေအကုန်လုံးဟာ မနုဿသူလျှိုတွေ ပြီးတော့ လူသားမျိုးနွယ်တွေအကုန်လုံး ငါ့ကို ဆန့်ကျင်နေကြပြီ ပြီးတော့ ဒိဋ္ဌဓမ္မတောင် ငါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါယုံထားတာက ငါ့မျိုးဆက်တွေ တည်တံ့နေဦးမယ်ဆိုတာကို။ မူရင်းကဗျာ In the Trap / Najwan Darwish (1978 – –) အင်္ဂလိပ်မူ Kareem James Abu-Zeid မြန်မာပြန် TS Tags: မြန်မာပြန်...
အားနက်ဟယ်မင်းဝေး – လက်မရွံ့လူသတ်သမားများ ဒေါက်တာကျော်တင့် (မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၂၅၊ ၂၀၁၆) ‘ဟင်နရီစားသောက်ဆိုင်’၏ တံခါးများပွင့်လာပြီး လူနှစ်ယောက် ဝင်လာသည်။ သူတို့က ကောင်တာရှေ့တွင် ဝင်ထိုင်လိုက်ကြသည်။ “ဘာသုံးဆောင်ကြမလဲခင်ဗျာ” ဟု ဂျော့ ကမေးလိုက်သည်။ “မသိဘူးကွ”ဟု တယောက်က ဖြေသည်။ “အယ်လ်၊ နင်ဘာစားမှာလဲ” “ငါလည်း မသိဘူး”ဟု အယ်လ်ဆိုသူက ဖြေသည်။ “ငါဘာစားချင်မှန်းငါမသိဘူး” အပြင်ဘက်မှာတော့မှောင်စပြုပြီ။ လမ်းမီးများလင်းလာသည်ကို ပြတင်းပေါက်မှဖြတ်၍မြင်ရသည်။ ကောင်တာတွင် ထိုင်နေသောလူနှစ်ယောက်က မီညူကိုဖတ်နေကြသည်။ သူတို့ကို ကောင်တာ၏ တဖက်ထိပ်မှနေ၍ နစ်က် အဲဒမ်စ် က ကြည့်နေ၏။ သူတို့ဝင်လာသည်အထိ နစ်က်က ဂျော့နှင့် စကားပြော၍နေခဲ့သူဖြစ်သည်။ “ငါက ဝက်သားကင် ပန်းသီးနှစ်ဆန်းဟင်းနဲ့ အာလူးမွှေစားမယ်”ဟု ပထမလူကဆိုသည်။ “အဲဒါက မရသေးဘူးဗျ” “ဒါဖြင့်...
လောကပါလ – ဒေါ်နယ့်စိတ်ဓာတ် (မိုးမခ) ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၁၆ သူ့အတ္တနောမတိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတဆိုသည်မှာ အမှုဆောင်ချုပ်ထက် ပို၍လေးနက်၏။ သူ သို့မဟုတ် သူမသည် နိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘာအတွက် အမေရိကန်လူမျိုးတဦး၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွက် အထိမ်းအမှတ်သင်္ကေတ တခုဖြစ်လေသည်။ သမ္မတ၏ကိုယ်စားပြုခွင့်အာဏာ တွေးခေါ် မြော်မြင်ခွင့် အာဏာအများစုတို့မှာ ပြောစကား (Narrative) မှ လာသည်။ သူပြောသည့် သို့မဟုတ် ပုံဖော်သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် အများပြောကြသည့် သူ့အကြောင်းများမှတဆင့် သမ္မတတဦးသည် နိုင်ငံ၏ သရုပ်ပေါ်စေမည့် အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းစဉ်တရပ်ကို ဖန်တီးဖော်ဆောင်နိုင်ရန် စိတ်ဓာတ်အင်အားသုံးစွဲ ခန့်ခွဲလေသည်။ ကျွနုပ်တို့အားလုံးကဲ့သို့ပင် သမ္မတတို့သည် စိတ်ပညာရှင်များက ဇာတ်ကြောင်း (Narrative Identies) ဟုခေါ်ကြသော ကိုယ်ရေးထုပ္ပတ ဘဝဇာတ်လမ်းများကို စိတ်တွင်း၌ ဖန်တီး၏။...
လောကပါလ ● ဒေါ်နယ့်စိတ်ဓာတ် – အပိုင်း (၅) (မိုးမခ) ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၆ ● သူ့ဓာတ်ခံ စိတ်ပညာသမားများအဖို့ရာ ဒေါ်နယ်ထရန့်အကြောင်းကို အတ္တဘာဝ ဆိုသောစကားလုံးမပါဘဲ ပြော၍မရနိုင်။ ဗင်နတီဖဲ (Vanity Fair) မဂ္ဂဇင်းအတွက် ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို အနှစ်ချုပ်ဖေါ်ပြပေးရန် မေးမြန်းမှုအပေါ် ဟားဗာ့ (Havard) စိတ်ပညာရှင် ဟောင်းဝါ့ဂါဒနာ (Howard Gardner) က ထင်ရှားသော အတ္တဘာဝသမားဟု တုန့်ပြန်ခဲ့၏။ လူတွင်ကျယ်လုပ်သော အမူအကျင့်များအကြောင်း စတမ်းဖတ်ပွဲများအား ဦးဆောင်ပြုလုပ်သူ ကုသရေးစိတ်ပညာရှင် ဂျော့ ဆိုင်မွန် (George Simon) က ဒေါ်နယ်ထရန့်သည် အလွန်တရာ ဂန္ဓဝင်မြောက်သည့်အတွက် သူ့အကြောင်း ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း အပိုင်းအစများကို အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ များတွင်အသုံးပြုရန်...
လောကပါလ ● ဒေါ်နယ့်စိတ်ဓာတ် – အပိုင်း (၄) (မိုးမခ) ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၁၆ ● သူ့အမူအကျင့် ရင်ဆိုင်ခြင်းအနုပညာစာအုပ်တွင် ထရန့်သည် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်များနှင့် အခြားသောရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေကြရသူများကို တွေ့ဆုံပြီး “ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေး၊ အားသာချက်ကိုသုံးပြီး အမြဲတန်းတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်” ကြဘို့ တိုက်တွန်းသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတရပ်တွင်ပါဝင်ပြီဆိုလျှင် ပြန်မလှန်နိုင်သည့်အင်အားဖြင့် စတင်ပြီး ကြီးကြီးမားမား မျှော်တွေးထားရမည်။ “ကျုပ်က သိပ်ပြီးမြင့်မြင့်မှန်းတယ်။ ပြီးရင် အဲသည်နေရာရောက်တဲ့အထိ တွန်းလိုက် တင်လိုက် တွန်းလိုက် တင်လိုက် ကျုပ် အဆက်မပြတ်လုပ်တော့တာ” ဟု သူက ရေးသားထားသည်။ ထရန့်ဆိုလိုသော “ရင်ဆိုင်ခြင်း” သဘောတရားမှာ စိတ်ပညာရှင်များပြောလေ့ရှိသည့် ကိုယ်ရေးစီမံချက် (personal schema) တမျိုး ဖြစ်လေသည်။ သူ့အတွေးထဲသို့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာသည့် လောကကြီးအား သိရှိစေနိုင်သော...
ဂါမဏိ – မြောက်ဘက်က စစ်ပွဲသစ် (ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး)
ဂါမဏိ – မြောက်ဘက်က စစ်ပွဲသစ် (ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး) (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၆ အခုဆိုရင် ကောက်ချက်တခုကို မလွဲမရှောင်သာ ချရပါတော့မယ်၊ အဲဒါကတော့ မနှစ်က အောက်တိုဘာလ မှာ တခမ်း တနားဝှဲချီးပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့လက်ခုပ်သြဘာသံကြား လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတဲ့ ဗမာပြည်က တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ရဲ့ အထင်ရှားဆုံးရလဒ်ဟာ နိုင်ငံ့မြောက်ပိုင်းမှာ စစ်ပွဲသစ်တရပ် ပေါ်ထွက်လာစေဖို့ လမ်းခင်းပေးလိုက် တာဘဲ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ ကောက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ချင်းတိုက်ပွဲနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ ဗမာစစ်တပ်တိုက်ပွဲတွေ ပေါ်ထွက်လာလို့ ဖြစ်လာ တဲ့ လက် ရှိအကျပ်အတည်းဟာ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ စတင်အာဏာယူမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရအတွက် ပထမဆုံးရှင်းရမယ့်လုပ်ငန်းဖြစ်မှာ သေချာသလောက်ရှိတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ အစိုးရသစ်နဲ့ စစ်တပ် ဆက်ဆံရေး ကိုလဲ...
မောင်ဖေသက်နီ – ဘာကြောင့် လက်ရာမြောက် အနုပညာပစ္စည်းတွေ အန္တရာယ်ရှိနေရတာလဲ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၆ (ဆိုဖီ ဟာဒက်စ် Sophie Hardach က ဘီဘီစီ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ၀က်ဆိုဒ်ထဲမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့မှာ ရေးသားခဲ့ တဲ့ ဆောင်းပါးကို မောင်ဖေသက်နီက မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုပါတယ်။) http://www.bbc.com/culture/story/20160208-why-are-these-masterpieces-at-risk ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမှာ အဓမ္မဖယ်ရှားခံခဲ့ရတာတွေ၊ ဘူဒိုဇာ တွေနဲ့ ဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရတာတွေ၊ သတ္တုနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ အနုအလှပန်းပုပစ္စည်းတွေဟာ မီးရှို့ အရည်ကြိုချက်တဲ့နည်းနဲ့ အဖျက် ဆီးခံခဲ့ရသလို ခိုးယူရောင်းချခြင်းတွေကိုလည်း ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီလိုဖျက်ဆီး၊ ရောင်းချခံခဲ့ရတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အနုပညာ လက်ရာတွေကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြသလို ကျန်ရှိနေသေးတဲ့...
မောင်ဖေသက်နီ – ဘာကြောင့် ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဒီနှစ်မှာ မှ ကြောက်မက်စရာကောင်းရသလဲ မိုးမခ ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး (မိုမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၆ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ အမေရိကားတိုက်မှာ အကြီးအကျယ်ပြန့်ပွားနေပြီး လူထုတရပ်လုံးရဲ့ အသက်အိုးအိမ်တွေကို ခြိမ် ခြောက်နေတဲ့အတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေကို ထုတ်ပြန်ကြေညာထားရ ဒေးဗစ် ကွမ္မဲန် David Quammen ဟာ နေရှင်နယ်ဂျော်ဂရော်ဖစ်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ရေး သားခဲ့ပြီး မောင်ဖေသက်နီ ဘာသာပြန်ပါတယ်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် Cincinnati စင်စီနာတီမြို့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ထဲ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒေးဗစ် ကွမ္မဲန် David Quammen ဟာ ရိုဒေ့စ် ပညာသင်ဆု Rhodes Scholarship...
မောင်ဖေသက်နီ – စရိတ်စကသက်သာတဲ့ နေရောင်စွမ်းအင်တွေက လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖန်တီးသုံးစွဲနိုင် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၆၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ထုတ် နေရှင်နယ် ဂျော်ဂရော်ဖစ် မဂ္ဂဇင်း National Geographic Magazine မှာ ၀ဲန်ဒီ ကို့ ခ်ျ Wendy Koch ရေးသားပြီး မောင်ဖေသက်နီ မြန်မာဘာသာပြန်ပါတယ်။ လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတဟုန်ထိုး မြင့်တက်နေတဲ့ အသံတွေကို စတော့ (တ်) မားကက်တွေမှာ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြားနေရပါ တယ်။ ငွေရှင်ကြေးရှင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေကတော့ နေရောင်ခြည်၊ လေစွမ်းအင်နဲ့တခြားသန့်ရှင်းတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို အမြတ် အစွန်းရရှိဖို့အတွက် သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်နေကြပါပြီ။ ဘာကြောင့် သူတို့အဲဒီလိုစဉ်းစားကြရသလဲကို လေ့ လာကြည့်ကြရအောင်။ (အခု တွေ့နေရတာက ဒိန်းမတ်နိုင်ငံပိုင် ဆမ်ဆောကျွန်း...
ခင်လေး – သောကအလွန် တနှစ် (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၅ သင်ဟာ အရေးပါတဲ့ လူတယောက်ပါ…. တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတယောက်ပါ…… ပြိုင်ဖက်ကင်းအောင် ထူးချွန်နိုင်တဲ့ သူပါ……။ အခြားသူတွေက အပြစ်တင်နေတာတွေကို ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ လက်မခံပါနဲ့…။ သင့်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်အတိုင်းနေပါ။ အံသြစရာကောင်းလောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေထိုင်လိုက်ပါ။ (Ricardo Housham) အလုပ်ထဲကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်း လမ်းလျှောက်ပြန်လာရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်မရဲ့ အတိတ်က စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေ၊ ဆေးစွဲနေတဲ့အခြေအနေတွေ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှုမရှိတာတွေကို စိတ်ထင်တိုင်း လျှောက်စား ပစ်နေတာတွေ…. ဒါတွေအားလုံးကို စွန့်ပစ်ခဲ့ပါပြီ…….။ ကျွန်မရဲ့ ဘ၀အသစ်အတွက် ခြေလှမ်း အသစ်တွေကို လှမ်းဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ…..။ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ချစ်ဇာတ်လမ်းတွေဟာ ကျွန်မရဲ့ဘ၀ကို ဖရိုဖရဲဖြစ်စေခဲ့ပြီး နာကျင်စရာတွေ၊ စိတ်မလုံခြုံမှုတွေ၊ အားငယ်စရာတွေနဲ့...